macOS High Sierra မှ macOS Sierra သို့အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲနည်း | ငါက Mac ပါ
MacOS Sierra ဗားရှင်းကိုယခု install လုပ်ထားသူများ (သို့) USB တပ်ဆင်ထားပြီးသောသူများအတွက်ဤအရာသည် option တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယနေ့ဤဆောင်းပါးကိုရေးသားစဉ် MacOS High Sierra ဗားရှင်းအသစ်ကိုယခုဖြန့်ချိခဲ့ပြီးသုံးစွဲသူများစွာသည် Mac မွမ်းမံထားခြင်းမရှိသေးပါ။ installable disk တစ်ခုကို USB (သို့) ပြင်ပ disk တစ်ခုတွင်ဖန်တီးရန်အရေးကြီးသည်.
အကယ်၍ သင်သည် MacOS High Sierra ကိုတပ်ဆင်ပြီးပါကယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပြသရန်ရွေးချယ်စရာမှာယခင်လည်ပတ်မှုစနစ်ဖြစ်သော macOS Sierra ကိုရရှိရန်ဖြစ်သည်။ အဆင့်မြှင့်တင်မှုကိုလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသော်လည်းအများဆုံးနှင့်စိတ်ချရသည်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည် MacOS Sierra ထည့်သွင်းထားသော Mac မှဤ bootable USB ကိုဖန်တီးပါကယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်စစ်မှန်ဗားရှင်းဖြစ်လိမ့်မည်အဖြစ်။ iMac, Mac mini, MacBook တို့ဟုတ်မဟုတ်အရေးမကြီးပါဘူး။ အားလုံးအတူတူအလုပ်လုပ်ကြတယ်။
အင်တာနက်ပေါ်တွင် Apple ၏ operating system ကိုတွေ့နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် Time Machine မိတ္တူဟောင်းမှပင်လျှော့ချနိုင်သည်။ သို့သော် Mac မှတိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်၍ installer ကိုဖန်တီးခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဒါဟာအမှန်တကယ်အသုံးပြုသူများစွာရှိသည်သောအရာတစ်ခုခုသည် ကျွန်တော်တစ် ဦး ချင်းစီဗားရှင်းအတွက်သုည installation ကိုလုပ်ဆောင်လျှင် WWDC မှာတင်ပြခဲ့သည် ဤ USB ကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်သောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
macOS Sierra သို့ပြန်သွားရန်ခြေလှမ်းများ
ကန ဦး အဆင့်မှာပုံမှန်ဖြစ်သည်။ Time Machine သို့အရန်ကူးခြင်း သို့မဟုတ်ပျက်ကွက်မှု၏အမှု၌ပြproblemsနာများကိုရှောင်ရှားရန်အလားတူ။ ၎င်းသည်ကိစ္စရပ်အားလုံးတွင်ပထမအဆင့်ဖြစ်ပြီး၊ ဤမိတ္တူမရှိလျှင်အချက်အလက်ဆုံးရှုံးမှုပြetc.နာများစသည်ဖြင့်ဖြစ်သည်။
အခုငါတို့လုပ်ရမယ် macOS Sierra installer ကိုဖန်တီးပါ ၎င်းကိုအနည်းဆုံး 8GB USB သုံး၍ အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤသို့ပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် MacOS High Sierra installer ကိုဖန်တီးရန်နှင့်သုညတပ်ဆင်မှုပြုလုပ်ရန်နှင့်အတူတူနီးပါးဖြစ်သောဤအဆင့်များကိုလိုက်နာနိုင်သည်။
Mac တွင် Sierra Mac ၌ရှိလျှင် 8GB သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသော USB ကိုထည့်ပါ
USB ကို "Untitled" format နဲ့အမည်ပြောင်းလိုက်သည်။
Terminal ကိုဖွင့်ပြီးအောက်ပါကုဒ်ကို paste လုပ်ပါ။ sudo / အပလီကေးရှင်းများ၊ ထည့်သွင်းခြင်း
ဤလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသောအခါ (၎င်းသည် Mac နှင့် USB အမြန်နှုန်းပေါ် မူတည်၍ အနည်းငယ်ကြာလိမ့်မည်) ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာ Disk Utility မှ macOS High Sierra operating system တပ်ဆင်ထားသည့် disk ကို format လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ အခုငါတို့အလှည့်ပဲ USB မှတပ်ဆင်ပါ ပြီးတော့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ် Mac နှင့်ကွန်ပျူတာကိုချိတ်ဆက်ထားသော USB ဖြင့်ပိတ်ပါ ကဖွင့်တဲ့အခါမှာ Alt ကိုနှိပ်ပါ MacOS Sierra ကိုတပ်ဆင်ရန် USB ကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးပြီးပါက Mac သို့ Sierra ကိုပြန်ထည့်ပါလိမ့်မည်။
MacOS High Sierra ကိုအသုံးပြုရန်အကြံပေးလိုသည် နှစ် ဦး စလုံးစနစ်များအကြားခြားနားချက်များအနည်းငယ်သာဖြစ်ကြပြီးငါတို့သည်ဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်သည့်အခါတိုးတက်မှုကိုသတိထားမိမည်မဟုတ်ပေမယ့်ကျနော်တို့ကသင်၏လက်၌ထားခဲ့ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » macOS High Sierra မှ macOS Sierra သို့မည်သို့အဆင့်မြှင့်တင်မလဲ
Kernel ကိုထိတ်လန့်ခြင်း ဟုသူကပြောသည်
AppStore တွင်မရှိတော့ပါက MacOs SIerra usb ကိုမည်သို့ဖန်တီးနိုင်သနည်း။
Kernel Panic သို့ပြန်သွားပါ
Juan B Salas ဟုသူကပြောသည်
ဒီနေရာတွင်သင်က download လုပ်ပါ https://support.apple.com/es-es/HT208202
Juan B Salas ကိုပြန်ပြောပါ
OS Sierra (USB torrents မှတစ်ဆင့်တည်ရှိနေသောဗားရှင်းများကိုကျွန်ုပ်မယုံသောကြောင့်) သည်အခြားနည်းတစ်နည်းရှိသေးသည်။ နည်းနည်းကြာသော်လည်းထိရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် OS Sierra ကို ၀ ယ်ယူထားသောနေရာတွင်မြင်တွေ့ရပါက download လုပ်၍ USB ကိုဖန်တီးပါကဤဗားရှင်းရှိ El Capitan ... သို့ဆင်းသက်သည်။
ငါမြင့်သောလွှကိုအသုံးပြုခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်ငါကရှိသည်ကတည်းကငါ့အ MacBook Pro ကိုပုံမှန်ထက်ထက်နှေးကွေးသည်, သူက apps များပိတ်, အချိန်ယူကြောင့်ငါ့ကိုနှောင့်အယှက် ... ငါအရမ်းမပျော်ဖြစ်၏။
carlos leon အားစာပြန်ပါ
Paqui ရန် ဟုသူကပြောသည်
ငါကလော့စ်ကိုလီယွန်းနဲ့အတူပါ၊ မြင့်မားသောလွှကို Macbook pro ထဲသို့မြင့်တင်လိုက်သောကြောင့်၎င်းသည်သော့ပါသည့်အာလူးဖြစ်သည်။ Sierra နဲ့ကျွန်တော်အရမ်းပျော်ခဲ့တယ်အရာအားလုံးချောချောမွေ့မွေ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ မြင့်မားသော Sierra အရာအားလုံးသည်ပြတ်တောက်နေပြီး၊ ယခင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နှစ်တစ်ထောင်ကြာပြီးအစီအစဉ်များအားလုံးပိတ်သွားခြင်း၊ ဆွဲတင်ခြင်းသို့မဟုတ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပုံစံအသစ်နှင့်သဟဇာတမဖြစ်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ လာပါ၊ တရားဝင်ဗားရှင်းဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်ဒုတိယအဆင့်တွင် beta ကဲ့သို့ပြုမူသည်ဟုသူတို့ပြောနိုင်သည်။ ငါထင်တာကတော့အဲဒါဟာအခမဲ့တဲ့စနစ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပေးဆပ်ရမယ့်စျေးနှုန်းဖြစ်မယ်၊ ဒါပေမယ့်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ နောက်တစ်ခါငါမွမ်းမံခြင်းမပြုမီခဏစောင့်ရလိမ့်မယ်။
Paqui To သို့ပြန်သွားပါ
ငါ့ကိုနောက်ဆုံး2ကဲ့သို့တူညီသောအရာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ငါတို့အားလုံးသည် (ဒီဇိုင်း) ရုံးတွင်အဆင့်မြှင့်တင်ခံထားရသောကွန်ပျူတာများဟောင်း (၂၀၀၉ ခုနှစ်အလယ်ပိုင်း) တွင်အလွန်အမင်းဒုက္ခရောက်နေသည်။ သူတို့အားလုံးနှေးကွေးနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် font manager plugins (FontAgent) မရှိတော့သည့်အပြင်၎င်းသည်ပြproblemsနာများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး၎င်းသည်သူရင့်ကျက်သော MacOs များဖြစ်ကြောင်းသေချာပါသည်။
ပစ္စည်းကိရိယာကိုအဆင့်မြှင့်ရန်အချိန်များစွာယူခဲ့ပြီးယခုအဆင့်မြှင့်တင်ရန် ပို၍ ကြာမြင့်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်မည်သူ့ကိုမျှမထောက်ခံပါ။ အနည်းဆုံးယခုဘို့!
Mauricio Penagos ဟုသူကပြောသည်
ဒီနေ့ငါ High Sierra ကိုသွားပြီး Office 2010 ဟာ Sierra နဲ့အလုပ်မလုပ်တော့ဘူး။ အခုငါဘာလုပ်လို့ရလဲ ကျွန်တော်ရုံးခန်းအသစ်ဝယ်ရမလား။
မကောင်းတဲ့အရာကသန့်ရှင်းရေးဆော့ဗ်ဝဲ (Dr. Cleaner) နဲ့ကွန်ပျူတာ၊ စနစ်အမှိုက်ဖိုင်တွေစသဖြင့်ငါရှင်းလင်းခဲ့တယ်။
Mauricio Penagos ကိုပြန်ပြောပါ
သင်သာဤပန်းသီးပင်မှဤ link ကိုရိုက်ထည့်ရန်လိုအပ်သည် https://support.apple.com/es-cl/HT208202၎င်းသည်သင့်အား MacOs Sierra ဗားရှင်းကိုပြသသည့်အက်ပလီကေးရှင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ သို့မှသာသင်သည်ယခင်ဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ သူကအရာရာတိုင်းကိုဂရုစိုက်ပါလိမ့်မည်။
ဟယ်လို! ၎င်းကိုကျွန်ုပ်အားထည့်သွင်းခွင့်မပြုပါ။ ၎င်းသည်ဗားရှင်းဟောင်းလွန်းသည်ဟုဆိုပါက၎င်းကိုကျွန်ုပ်တပ်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုသင်သိပါသလော။
ဟယ်လို! ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုလည်း၎င်းကိုထည့်သွင်းခွင့်မပြုပါ။ ၎င်းသည်ဗားရှင်းဟောင်းလွန်းနေပြီဆိုလျှင်မည်သူမဆို၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်ဘာလုပ်ရမည်ကိုသိပါသလား။
သီအိုရီအရဆိုရလျှင်၊ ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် update လုပ်ထားသော version တစ်ခုရှိပြီးသားဖြစ်သည်၊ သင်ဆက်လက်နှိပ်ရုံသာဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ High Sierra ဗားရှင်းမှ Sierra သို့သွားပြီး High operating system ဖြစ်ပါသလား။
Roger Arrambide ဟုသူကပြောသည်
ငါ့ကိုဘယ်လိုကူညီနိုင်လဲ။ ငါအရင်က Sierra (El Capitan လို့ထင်တယ်) ရှိခဲ့တာကြာပြီ။ ပြီးတော့ disk ကို solid အဖြစ်ပြောင်းလိုက်တယ်။ WOOOWW my MacBook Pro က ၂၀၁၁ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။
အရာအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။ OS အသစ်ကိုအသစ်မပြောင်းချင်ဘူးသူတို့အမြဲတမ်း bug တွေရောက်နေတယ်။ ဒါကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့ ၂-၃ ပတ်လောက်မှစပြီး Sierra ကို update လုပ်ဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အားလုံးကောင်းနေပုံရတယ်။ နောက်ဆုံးပေါ် High Sierra ခေတ်နှင့်ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်သည် HIG Sierra သို့အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးထို မှနေ၍ ကျွန်ုပ်၏ခေါင်းကိုက်ခြင်းစတင်ခဲ့သည် !!!!!
ပထမ ဦး စွာ 32bit applications များအလုပ်မဖြစ်တော့ပါ၊ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်သည် Office 2011 သို့မဟုတ် 2010 နှင့်အပြည့်အဝအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးပြီ ဖြစ်၍ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်အသစ်တစ်ခုကိုဝယ်ရတော့မည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် YouTube နှင့် 2016 ကိုကူးယူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်အံ့အားသင့်သွားသည်မှာ 32bit သည်အလွန်မြင့်မားသည်။ !!!!! ... မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ စက်သည်နှေးကွေးနေသည်၊ အချို့သောအစိတ်အပိုင်းများတွင် scroll လုပ်သောအခါ၎င်းသည် ၂၀၀၀ မှ ၄၈၆ နှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများတွင်ယေဘုယျအားဖြင့်ထင်ရသည်။ ၎င်းသည်ယခင်ကထက်သိသိသာသာနှေးကွေးခဲ့သည်။
ယခုငါပုံနှိပ်။ မရပါ၊ ကျွန်ုပ်ဤဗားရှင်းနှင့်အခြားအရာများဖြင့်ပုံနှိပ်ရလျှင်၊ မနေ့ကမူပရင်တာသည်ခေတ္တရပ်တန့်သွားပြီး၊ သင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်တစ်စုံတစ်ရာပို့ပေးသည်၊ ၎င်းသည်ပုံနှိပ်စာရင်းသို့ရောက်ရှိပြီး“ ခလုတ်ဖွင့်ခြင်း” ပေါ်လာမည်။ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်၊ ပုံနှိပ်ခြင်းကဆက်ပြောသည်ဟုဆိုသည်။ စတင်ခြင်းအကြောင်းစတင်သည်၊ စာရွက်စာတမ်းဘားကိုဖွင့်သည်။ 3-4 စက္ကန့်ကြာသော်၎င်းသည်တူညီသော mode သို့ပြန်သွားသည်။ ပြtheနာမှာကျွန်ုပ်သည်ထိုပရင်တာပေါ်တွင်ပုံနှိပ်နိုင်သည်ဆိုပါကပြstartsနာဖြစ်သည်။ multifunctional HP၊ အခြားကွန်ပျူတာတစ်လုံး၊ iphone မှစသည်။ HP Utility ကိုတောင်ငါဖွင့်လိုက်တယ်၊ ငါစာမေးပွဲအချိန်ကို print ထုတ်တယ်၊ scan ဖတ်တယ်၊ အလုပ်လုပ်တယ်။ ပြTHEနာအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်၏ MacBook မှပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည် ...
ငါအရာအားလုံးကိုလုပ်ပြီးပြီ, ပုံနှိပ်ခြင်း pref ကိုပြန်လည်တည်ထောင်ရန်, စာကြည့်တိုက်ကိုသွားနှင့် com.apple.impresion, etc စသည်တို့စသည်တို့ကိုကော်ပီကူး, အရာအားလုံးအရာရာ !!! !!!
ကျွန်တော်သံသယက Capitan အထိသူတို့ဆီမှ Sierra သို့ပြန်သွားရန်မည်မျှရှုပ်ထွေးသည်၊ ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးလုံခြုံရေးမိတ္တူသည်ငါ Sierra ရှိစဉ်အခါ၊ High Sierra နှင့်ကျွန်ုပ်သည် Copy လုပ်ရန်အချိန်စက်ကိုမသတ်မှတ်ထားသော်လည်း၊ ငါ High Sierra ဖြင့် backup မိတ္တူတစ်ခုပြုလုပ်ပါက၎င်းကို Sierra တွင်အသုံးမပြုနိုင်တော့မည်ကိုစိုးရိမ်သည်။ သို့သော်၎င်းမိတ္တူသည် ၂ ပတ်ခန့်ရှိပြီး၊ အချို့သောစာရွက်စာတမ်းများ၊ အထူးသဖြင့် Dropbox ကိုပြုပြင်ပြီးပြီ။
၁.- ကျွန်ုပ်သည်ကူးယူထားသည့်မိတ္တူတစ်စောင်ကိုပြုလုပ်နိုင်သလား၊ သို့မှသာဤသည်ကျွန်ုပ်၏စာရွက်စာတမ်းများအရဆုံးဖြစ်သည်၊ ထိုမှ Sierra ကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ရန်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုငါလုပ်နိုင်ပြီး၎င်းကိုကူးယူ။ ကူးယူနိုင်ပါသည်။
2.- ကျွန်ုပ်သည် MacBook အားပေးသောအခြားပြproblemနာတစ်ခုခုရှိပါသလား။
3.- ငါ Capitan နှင့်အတူရှိခဲ့စွမ်းဆောင်ရည်, ငါ High Sierra နှင့်အတူရှိနိုင်တယ်လို့တစ်ချိန်ချိန်ထင်နိုင်သလား?
Sierra ၏ backup မိတ္တူကို အသုံးပြု၍ Dropbox ဖိုင်တွဲကိုကူးယူရုံဖြင့်အစားထိုးရုံဖြင့်မည်သည့်အန္တရာယ်များရှိနိုင်သနည်း။
Rogelio Arrambide အားပြန်ပြောပါ
Apple Watch Series3Edition ၏နီလာကျောက်ကပ်သည်မည်မျှခံနိုင်ရည်ရှိသနည်း။
Fedder Drives သည် APFS စနစ်နှင့်သဟဇာတဖြစ်မည်ဟု Federighi ကအတည်ပြုသည်